Job Job: Senior Sales Executive |Nha yezvigaro: 1 |Nzvimbo: South India
Inovaka bhizinesi nekuziva uye kutengesa tarisiro.
Kuchengeta ukama nevatengi.
Senior Sales Executive Job Mabasa:
Kunobatsira vashandi kubudirira uye kukwanisa kuburikidza nekuronga kuendeswa kwemhinduro; kupindura mibvunzo yehutano uye yehutano kune nhengo dzemauto vane ruzivo; kudzidzisa kuvandudzwa kwenzira; vatungamiri vesangano.
Inoshandisa mikana yebhizimisi nekuziva maonero uye kuongorora nzvimbo yavo mune zvemabhizimusi; kutsvakurudza uye kuongorora kutengesa zvingasarudzwa.
Sells Kudzidzisa Solution kuburikidza nekugadzirisa kusangana nekukudziridza ukama nematarisiro; kukurudzira matanho.
Inochengetedza ukama nevatengi nekupa rubatsiro, ruzivo, uye kutungamirirwa; kutsvakurudza uye kurumbidza mikana mitsva; kukurudzira kubatsira nekuvandudzwa kwebasa.
Anoziva hurongwa hunovandudzika nekusimbiswa ikozvino kumabhizimisi mafambiro, maitiro emisika, uye makwikwi.
Inogadzira mharidzo nekuunganidza, kuongorora, nekupfupisa mashoko.
Inochengetedza basa rakanaka kuburikidza nekugadza nekusimudzira masangano ezvesangano.
Inochengetedza ruzivo rwehuni neruzivo kuburikidza nekuenda kumasangano ekudzidzisa; kubvunzurudza nyanzvi mabhuku; kusimbisa mawebhendi; benchmarking state-of-the-art maitiro; kupinda muchikwata chemasangano.
Inobatsira kugadzirisa kambani kuburikidza nekuzadzisa migumisiro yakafanana sezvinodiwa.
Senior Sales Executive Skills uye Qualifications:
Chero Chikoro chechikoro, MBA inomanikidzwa
Musangano Sales Goals,
Kumbira A Kudana Kudzoka?